Abenzi basechina i-CY-8 (iithayile zangasese) kunye nabathengisi | Jialong
Isimo esihle sosuku siqala kwigumbi elicocekileyo
1, uyilo imilo Unique, ezintle, nesisa, esebenzayo, kumbhobho intsimbi usebenzisa iteknoloji umphezulu yokutshiza phambili, uzinzile ngaxeshanye ukuphucula umthamo ukuzala, ukubeka izinto ikhuseleke ngakumbi.
2, Ukusetyenziswa kobuchwephesha bokutshiza umphezulu, ubomi obude benkonzo, ukungabi namanzi kunye nokuqina, akukho lula ukurusa, kulula ukucoca kunye nokucoca imihla ngemihla.
3, Nangona kwithala zeplastiki zemveli zitshiphu, kuthatha indawo kwaye ilungele kuphela iindawo yethutyana ezifana izindlu eziqeshisayo. Ishelfu yethu yangasese inokubekwa emva kwendlu yangasese, enokusebenzisa ngokufanelekileyo indawo engenakusetyenziswa ngamaxesha aqhelekileyo kwaye yenze indlu yangasese ingasekho mdaka.
4, Ukusetyenziswa-maleko ezintathu bopha uhlobo sentsimbi ipleyiti kwandisa indawo ukusetyenziswa kwaye kwandisa umthamo ukuzala.
5, Adjustable oomatshini Screw unyawo nga ngempumelelo ukuthintela skid, kwaye ukunyenyisa ukuphakama ngokungenasizathu ngokweemeko kanye, ngokuphepha ukuthintela ukungazinzi ezingazinzanga.
Indawo yokuhlohla:Uhlobo lomgangatho wethala, ukhululekile ukubhola, ukukhusela iithayile, kufutshane nodonga ngokukhuselekileyo.
Ingxelo yoMthengi:Ngenxa yengxelo evela kubathengi abaninzi, i-hook yesinyithi kathathu kulula ukuyityumza ngexesha lokuhamba ngenxa yevolumu yayo enkulu. Ukwenzela ukuthintela igwegwe ekutyunyuzweni kwakhona kwaye ichaphazele amava, kusetyenziswa amagwegwe eplastikhi amathathu atyebileyo, kunye nephepha lephepha lalo nalo liqinisiwe ngeplastiki.
Ngeelungelo elilodwa lomenzi, umgangatho elungileyo uthembekile.
Abasebenzisi bolunye udubulo oluphilayo, basebenza kakhulu kwaye balungele uphawu lwethu lwangasese.
Ezothutho:Imveliso yethu nganye isebenzisa ukupakisha okuzimeleyo, kwaye ibhokisi yokupakisha ikwamkela ukwenziwa ngokwezifiso. Unokuqhagamshelana nathi ngokuthe ngqo, kwaye siya kuyenza ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi bethu.
Egqithileyo I-CY-9 (Umatshini wokuhlamba iimpahla)
Okulandelayo: CY-7 (Aluminium kwendawo yokuhlala)